Mhedzisiro yepamusoro paGoogle naSemalt
Iyo internet yakazara pamusoro neruzivo. Vazhinji vedu vanoremerwa nemavara, nhau, mameseji atinofanira kutarisa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Zviuru zvemawebhusaiti anogara munzvimbo yedhijitari, uye mazhinji azvo vakwikwidzi. Saka tingaite sei kuti bhizinesi ribudirire mune aya mamiriro? Ehe, kukurudziro mumadhijitari kune mayo mirawo uye avo, vanovanzwisisa vanokunda mujaho uyu.
Pasina mubvunzo, kumhanyisa bhizinesi repamhepo kwakasiyana chaizvo nezvose zvaunoita muhupenyu chaihwo kuti uwane mari uye uwane kukura kwebhizinesi rako chairo. Avo vanodzidza mitemo vanogona kuwana budiriro. Saka kushandisa webhusaiti optimization kunobatsira kuratidza zvako zvinhu kana masevhisi. Bhizinesi rako rinozoonekwa kune vangangove vatengi.
Inogona kuve yakakosha kune varidzi vebhizinesi, nyanzvi dzekudyidzana neruzhinji, uye maneja maneja kuti vadzidze nezvenzira nyowani dzekushandisa zvishandiso zvewebhu zvakanaka. Zvese zvawakaita kuti uwane mari zvinogona kuvandudzwa kuti zvive nemhedzisiro iri nani.
Kugamuchira rubatsiro rwehunyanzvi hwechikwata cheSemalt, bhizinesi rako rinogona kusvika kune Google yepamusoro mhedzisiro uye riwane rubatsiro rwawakarota iwe.
Ingave iri mukana wekuti uwane mhinduro dzinokurudzira rako bhizinesi paInternet uri wega?
Pano kana apo, isu tinowana nyaya dzevarume vane vakadzi vane rombo vakawana mari yavo nyore muWorld Wide Web. Ehe, zvinosimbisa chaizvo. Asi idzo nyaya dzinowanzoitika mhedzisiro yerombo rakanaka, kusika kana kuwirirana. Asi iwe une chokwadi here nezve yako pachako pfungwa dzekusimudzira kushandisa mari hombe pairi? Ungave uine simba rakakwana kuti uzvidzidze pachako, uchipedza nguva yakawanda uku vachikwikwidzana vangangoshanda nenyanzvi kuzadzisa zvinangwa zvavo. Kana iwe ukasonyatsoziva zvekuita, zvinotora nguva yakawanda kuti unzwisise kuti zvinoshanda sei. Kana iwe ukasawana zvese zvakanaka, mari yekusimudzira inogona kutambisa pasina.
Waizowedzera yako e-commerce traffic isina rubatsiro rwakawedzerwa, uye yaizotora nguva yakareba sei? Pasina kupokana, zvakakosha kuve neruzivo nezvekusimudzirwa kwepamhepo. Iwe unogona kuverenga zvakawanda zvemashoko, kuenda kuma webinars, kutora chikamu muboka kana yega kosi kosi. Nhanho nedanho, iwe waizowana ruzivo rutsva kubva kwakasiyana masosi, asi mushure mezvose, unogona kuodzwa mwoyo nemhedzisiro. Kungoti kuedza kwako hakuna kukwana kuronga zvese nenzira kwayo. Mumamiriro ezvinhu aya, bhizinesi rako richarasikirwa nemikana yekukura kwevhiki nemwedzi. Wese munhu anofanirwa kufunga kaviri pamusoro pekuti chii chakanyanya kukosha kwavari mune iyi kesi. Vanofanira kugamuchira iyi phantom hupfumi, kana ivo vanofanirwa kuisa mari yavo mune remangwana mari nekuchenjera kuti vawane mugumo nekukurumidza uye zvakanyanya kubudirira?
Pamhepo networking zvishandiso zvebhizinesi rako
Mazuva ano, zvitoro zvepamhepo zvave zvakakurumbira. Vanhu vanogona kugara pamba uye kushandisa nguva yavo zvakanaka panguva yavo chaiyo kutenga, kuwana zvinhu zvinhu muhupenyu chaihwo. Iwe unogona kutenga zvinhu uye masevhisi kubva kune chero chikamu chepasi redu, uye zvinogona kuitika nekukurumidza zvakanyanya sezvazvaigona mumakore apfuura. Mumamiriro ezvinhu aya, zvakakosha kuti hukama hwako huve hwakakwana, hwakachengeteka, kupa pfungwa kune munhu wese, uye kuvabatsira kutungamira pane sarudzo iri nani. Uye usakanganwa iyo yekutanga-yekutengesa sevhisi.
Ungaite sei kana vanhu vazhinji vakashanyira saiti yako uye vanoda mhinduro dzemibvunzo yavo? Iwe unofanirwa kuramba uchivafadza nechitoro chako chepa online. Izvo zvinodikanwa kuti uve nevatengi enguva dzose kana kunyange vateveri vechiratidzo. Ndokusaka varidzi vebhizinesi vachifanira kushandisa Semalt SEO zvishandiso nerutsigiro rwevashandi vane hunyanzvi. Sezvo iwe nechikwata chako maisakwanisa kuwana nguva yakakwana yekupa rubatsiro uye rutsigiro kune munhu mumwe nemumwe kana paine vakawandisa vavo. Vanhu havadi kumirira, saka vemabhizinesi vanofanira kufanoona mamiriro ezvinhu aya uye kushanda pairi nevanozviita basa zvisati zvaitika.
Kugadzira yakachenjera yekushambadzira maitiro kune chero rudzi rwebhizinesi, iwe unofanirwa kusanganisira iyo bhajeti yezvesimba uye inoshanda SEO zvishandiso. Izvo zvichaita yenguva refu mhedzisiro pamwe nezano kubva kune vedu varapi.
Mhando dzakasiyana dzemabhajeti dzinowanikwa kuitira kuti chero munhu asarudze yakakodzera kwazvo. Iwe unogona kukwezva vatengi vanoda chigadzirwa chako nerubatsiro rwavo uchishandisa mimwe misika yekushambadzira, hongu.
Iwe unofunga zviri nyore kutengesa here? Zvakanaka kutenga zvinhu kutenga online shopu yakagadzirwa nehungwaru. Izvo zvichave nyore kutengesa kana iwe ukagadzira zano iyo ichakusimudza kumusoro. Wana zvakanakira, bvunza zano, uye rubatsiro kubva kune vanhu vakazviita kakawanda. Iwe uchakura kutengesa kwako uye uwane bhizinesi rakatsiga nevatengi, vanozopa zano rako. Gara wakabatana, ratidza zvaunowana, uye ita vatengi vanogona kufarira.
Semalt Webasa webhu
Nekubatsira kwezvishandiso zvepamhepo, mari yaizokwira. Izvo zvichaitika nekuti webhusaiti yako ichakwanisa kuitisa vanhu vazhinji vatsva, asi ichave vatengi vanobva mudunhu rimwe. Nechirongwa chakagadziriswa nehunyanzvi hweDhijitari Agency, iwe unogona kusvika kune mamwe matunhu, nyika, uye dzakasiyana nzvimbo dzenyika. Saka Semalt haangopi SEO zvishandiso chete asiwo anovandudza iwo maitiro ekubatsira rako bhizinesi kushanda pasi rese uye kuve mukurumbira. Tinogona kuvandudza kugona kweinjini yekutsvaga. Wedu Agency inopa rubatsiro rwehunyanzvi pakusarudza iwo mazwi akakosha akanyatsoenderana neako bhizinesi basa.
Semalt ichakubvumidza iwe kugamuchira ruzivo rwakakodzera nezvevadziviriri, data rinowirirana nezve chikamu chako chemusika kana indasitiri. Izvo zvinokwanisika kutarisa metrics mune zvemagariro media, kugadzirisa rako uye kuvapo maererano nazvo.
SEO ichave yakakosha kwazvo muzana rino. Kudyara mari inonzwisisika pamwe nekudyidzana kwezuva nezuva, muridzi webhizinesi anowana kambani inogara ichikura. Yako mhando ichagamuchira organic traffic neinjini zvekutsvaga. Yakatadza bhizinesi zvikanganiso yaizobviswa imwe neimwe. Ehe, hapana munhu akakwana, zvidiki kukundikana kunogona kuitika, asi yakasimba nzira yekushambadzira ichaunza iyo kambani kubudirira.
Iko kuvandudza kwe digital commerce uye iyo Internet ndiyo yaive chikonzero chechitarisiko cheSemalt. Maive munaGunyana 2013 apo vashoma vekugadzira, vane tarenda vanhu vakasarudza kuve timu. Uye ivo vaive ivo Semalt vatangi vakagadzira chishamiso. Mazuva ano kambani yakadzidza, vashandi vane hunyanzvi uye vatengi vakagutsikana pese pasirese, kubatsira vanhu kuti zviroto zvavo zvizadzikiswe.
Chii chaunofanira kuongorora bhizinesi rako nhasi? Haufanire kushanyira jasi kana kumirira mumutsara. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kubatana neDigital Agency yedu nyanzvi uye kutora mamwe matanho kukura bhizinesi rako. Izvo zvichabatsira zvisinei kuti uripi uye kuti ndeupi nyika yako. Kana iwe uchida kuwanda nemafoni uye maemail kubva kune vatengi, tengesa kutengesa kwako, uye uwane kubatsirwa kubva kubasa rako, ingo ramba uchiverenga.
Iwe uri kutya kuti ungasanzwisisa Semalt SEO zvishandiso? Vatengi vedu vanobva kwakawanda nyika dzakasiyana, saka vashandi vedu vachataura kwauri mutauro wezvesarudzo zvako. Huya kuno kuzoongorora rondedzero yemitauro. Vatengi vedu vanotitumira mazwi ekutenda nekuvabatsira kukudziridza uye kubudirira:
RUDZIDZO YENYAYA (Apple Service Center). Ichishandisa Semalt FullSEO, iyi kambani (yakavakirwa muUkraine) yakawedzera traffic yayo yemagetsi nemakumi matatu neshanu isingasviki gore!
Zaodrasle.si. Mwedzi gumi yekushanda naSemalt yakabvumira iyi yeSlovenia-based online sex shopu kuwedzera organic traffic pane webhusaiti yavo ne520%. Mwedzi wega wega nhamba yekushanya yakawedzera na 1216. Nekuda kweizvozvo, Zaodrasle.si ikozvino yave kambani inotungamira yeSlovenia muchikamu chayo chemusika.
Portal yekutsvaga nekutenga maflogeises. FullSEO package yakakwanisa bhizinesi iri kuti riwedzere huwandu hweGoogle TOP-10 kiyi kiyi kusvika kuma882, nekudaro ichiwedzera traffic yayo yemagetsi ne303% mumwedzi 9 chete. Nhasi, kambani iyi ndeimwe yemazita akakurumbira muindasitiri yefrancise yeUK.
Iwe unoshandisa Internet? Ipapo iwe unosungirwa kuziva iyo injini yekutsvaga. Iwe wakashandisa imwe kana yakawanda yadzo. Pakati pezvakasiyana, Google ndiyo yakakura. Chinoshanda sei? Unonyora izwi rekutsvaga kana mazwi, tinya 'kutsvaga,' uye injini yekutsvaga inodzosera iwe runyorwa rwesaiti dzakawanikwa. Sei vamwe vari mumitsara yepamusoro yezvigumisiro, vamwe vari pasi pasi rondedzero? Statistics inotitaurira, ruzhinji rwevashandisi chete tarisa nzvimbo dzekumusoro. Kuti uve ipapo, iwe unofanirwa kupinda mu TOP-10. Kuti uratidzwe kumusoro kwekutsvaga mhinduro, iwe unofanirwa kutora matanho, ayo anovandudza nzvimbo yako mune runyorwa rwemibvunzo.
Isu SEO zvishandiso
Semalt mainjiniya inyanzvi mukuita kuti webhusaiti yako ioneke mune yekutanga chinzvimbo muGoogle TOP 10. Kana iwe uripo, yako traffic uye yekutengesa online icha rocket. Statistics hairevi nhema - uto revashandisi veInternet riri kukura zuva nezuva. Parizvino, chinopfuura chikamu chimwe muzvitatu chehuwandu hwepasi rose chiri paInternet. Iwe unofanirwa kukwezva vateereri ava, nekuti iwe une bhizinesi, uye ine mari yekushandisa. Zviuru nezviuru zvevashandisi zvinotsvaga izvo zvinhu zvakaenzana neyako pane ako mawebhusayithi evavengi. Vakwikwidzi vako vanomhanya mhanya kutarisira kutora nzvimbo dzakanakisa mune dzekutsvaga injini mhinduro. Nei usingaite? Iwe unofanirwa kuve uripo - saka ipa hupenyu kune webhusaiti yako nekutsvaga injini optimization.
Vanhu vanoda mavhidhiyo! Tinogona kuratidza zvaunoita muvhidhiyo yekuvandudza vhidhiyo. Ichakuunzira vatengi vatsva uye inokura kutendeuka kwako!
Commerce saiti kuongorora
Munyika yedu yekukurumidza, chimwe chezvinhu zvakakosha ruzivo. Kana iwe ukachiwana munguva, iwe unogona kugadzirisa matanho ako ekuenderera uye kudzivirira zvinokanganisa zvinorwadza. Imwe yenzira dzekudzora bhizinesi rako kuvandudza ndeyekutarisa yedu yekuongorora data uye remangwana rekufambira mberi. Tora chinangwa cheruzivo online nehunyanzvi hwedu.
Ingofungidzira, pamamiriyoni mazana matatu emamiriyoni evanhu vanogona kuva vatengi vako mune ramangwana. Saka sei vasingaendi kunotenga online izvozvi? Idzo tsitsi, asi vatengi vako vangangovhiringidzwa nemamiriyoni evatengesi vanokwikwidza newe mukubata vatengi nemari yavo. Vaya vakwikwidzana vanongorega iwe kuti uende muGoogle yepamusoro. Kuti uve muhwina mumakwikwi asingaperi, iwe unofanirwa kusarudza rakanyanya nyanzvi timu yekushanda naro.
Pamwe chete neSemalt, iwe unogona kuwana nzira itsva dzekuvandudza kushambadzira kwako. Tinogona kuronga yakakwana-yekumbundira sevhisi inogona kusanganisira: online chitoro kuvandudza, redesign pamwe nekusimudzira kwayo uye yakanakisa technical technical. Bata isu varayiridzi uye uwane zvakanyanya kusimba mhedzisiro neSemalt nyanzvi!
Nei vanhu vachitisarudza?
Munguva yekudyidzana neDigital Agency yedu, vashandi vedu vanokutsigira maawa makumi maviri nemaviri pazuva, mazuva manomwe pasvondo. Ivo vachanzwisisa zvidiki zviduku zvebhizimusi rako repamhepo.
Takatobudirira pane zvinopfuura 800 000cases uye ndapedza. Takabatana nevatengi vanopfuura mazana matatu ezviuru. Unogona kutarisa mapurojekiti ese ari pawebhusaiti yedu.
Mutengo unonzwisisika yemhedzisiro yakanakisa
Vatengi vedu vanotenda kunaka kwebasa redu zvine chekuita neyakajairika mitengo uye inoratidzika mutengo inopihwa.
Yakazara Yekutsvagisa injini yekushandisa
Chekutanga pane zvese, yako projekti yaizove neako maneja anozove nebasa rezvese mafambiro atinopa. Tichaunganidza zvakakwana ruzivo nezve vakwikwidzi vako zvisati zvaitika. Maitiro esaiti anozoongororwa. Kuti tikwanise kukwezva vateereri vavatarisana, yedu SEO timu yaizotora mazwi akakodzera zvakanyanya pamwe nemapeji ekukurudzira emitsara yakakodzera. Webhusaiti yako yaizoongororwa mafirita eGoogle. Nyanzvi yedu inonyatsogadzira zano rekuenderera mberi chiitiko
Mashoma matipi ekugonesa online zviwanikwa
Isu tinopa zano zvine simba kushandisa izvi kurudziro. Izvo zvaizoite rako bhizinesi kukwikwidza. Yako webhusaiti inodzivirira zvirambidzo, uye kukwidziridzwa kwako kungave kuri kushanda zvakanyanya.
Kuongorora uye kugadzirisa HTML kodhi kuti iite yakakwana;
Kugadzira tags uye hunhu zvichitsvaga mutsva injini dzekutsvaga standard;
Kugadzira meta tags uchishandisa mazwi akakosha.
Kupa optimization, isu tinovhara zvakaputswa zvinongedzo. Zvakare, isu tinogadzira hwakawanda sezvinobvira kubatanidza kune izvo zvinokurudzirwa zviwanikwa. Izvo zvakakosha kwazvo kugadzirisa marobhoti.txt uye .htaccess mafaera. Ichi chiitiko chinopa mukana wakanaka pakuratidzika kwewebsite yako mumazinga einjini yekutsvaga.
Zvimwe pane mazwi mazhinji akanyanya uye mazwi asingazivikanwe? Hatidi kuti iwe uwedzere kuvhiringidzika. Asi hazvisi nyore kuti kuve mukurumbira muWorld Wide Web. Izvo zvinoda ruzivo rwakakosha uye ruzivo rwakabudirira rwemapurojekiti apfuura. Pamwe chete nechikwata chedu chakangwara uye chine hunyanzvi nyanzvi, muchawana mushandirapamwe wakasimba weSEO. Webhusaiti yako inozoonekwa kune vatengi uye vanhu vanofarira mabasa ako kana nhumbi nerubatsiro rwedu.
Hazvina mhosva kuti unogara kupi kana kuti mutauro upi waunoshandisa kutaura. Iwe unogona kuva chero mhando yebhizinesi, uye isu tichakutsvaga mhinduro iwe. Kubheka yemuno kana kugoverwa kwemotokari, chero bhizimusi rinogona kuve rakajeka. Edza kugadzirisa bhizinesi rako neDhijitari Agency uye kuti uwane mibairo yakanaka!